11:21 PM IT_Youth_Donation No comments
ဘိုင်ပင်ဂူရွာလေးသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းမှုပြီးမြောက်ခြင်းအတွက် အဘက်ဘက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီကြသော အလှူရှင်များနှင့် ပရဟိတအဖွဲ့
ပေါင်းစုံမှ လူကြီးမင်းများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ကလေးငယ်များ ၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနှင့်အမှတ်တရ
ရထိုက်သောအခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်ရှိသော လွတ်လပ်မှုတွေရရှိနိုင်ကြပါစေဗျာ
ပီတိများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရင်း နောင်များမှာလည်းအလှူရှင်များ ဒီထက်မကလှူနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ချွေလျှက်
8:20 AM နေဇော် လင်း No comments
2:23 AM IT_Youth_Donation No comments
ပရဟိတဆိုသည်မှာ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပရဟိတ
ဆိုသော အရာကို ငွေကြေး၊ ဥစ္စာ၊ ဂုဏ်ဓန၊ ပကာသနတွေရှိမှလုပ်၍ရသောအရာမဟုတ်ပေ။
လူတစ်ယောက် တွင်ပရဟိတ ဆိုသောစိတ်ဓာတ်ရှိရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ပရဟိတဆိုသောစိတ်
ဓာတ်သည် အများအားဖြင့် လူသားတိုင်း တွင်ရှိကြပါသည်။ တစ်ချို့သည် ငွေဥစ္စာမရှိ၍ဟုဆိုကာ
ပရဟိတဆိုသော အလုပ်နှင့် စိတ်ဓာတ် ကိုမေ့လျော့နေတတ်ကြသည်။ တစ်ချို့ကြပြန်တော့လည်း
ငွေ၊ ဥစ္စာကြွယ်ဝလွန်းကာအပျော်တွေနဲ့လုံးပန်း ဂုဏ် ပကာသနတွေကြားမှာ ထိုပရဟိတစိတ်ဓာတ်
ပရဟိတအလုပ်ကို မေ့လျော့နေတတ်ပြန်သည်။ပရဟိတဆိုသော အလုပ်ကို တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ
ကမှသာလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လူသားတိုင်းအားလုံးစုပေါင်း ကာ ပရဟိတထြိုဖူစင်သောအလုပ်ကို
လုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် မိမိကြောင့်ပြုံးပျော် နိုင်ရင်မိမိစိတ် သည် အလို
လိုပြုံးပျော်နိုင်သည်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်ပင်အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော အလုပ်သည်
မည်သူအတွက်လဲ၊ ကိုယ့်အတွက်လား၊ ကိုယ့်မိသားစုအတွက်လား၊ အများသူငါအတွက်လား စဉ်းစားပါ။
မိမိအတွက် ကိုယ့်မိသားစုအတွက်ဆိုရင်တော့ လောဘနှင့်ပြုလုပ်သော အတ္တဟိတစိတ်ဓာတ် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပြုလုပ်ခဲ့ သောထိုအလုပ်သည် ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်အများအတွက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
ဖြူစင်မှုနဲ့ပီတိဖုံး သော ပရဟိတစိတ်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသည် အများအားဖြင့် လူငယ်ဆိုသောအရွယ်တွင် လွတ်လပ်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊
အပျော်အပါးတွေကြားမှာ မအားလပ်နိုင်အောင်ပင်ရှုပ်ထွေးလျှက်ရှိနေတတ်သည်။ လူငယ်များသည်
ဖျတ်လတ် တတ်ကြွသောခွန်အားတွေရှိကြသည်။ ထိုသို့သော် ဖျတ်လတ်တတ်ကြွသော စိတ်ဓာတ်ခွန်အား
တို့ကို အများ အတွက်အကျိုးရှိသောအလုပ်ကို မိမိတတ်နိုင်သမျှ မိမိပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းဝိုင်းအတွက်
တစ်ထောင့်တစ်နေရာ ကနေလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ခြင်းသည် မိမိအတွက်အများအတွက်အလွန်ပင်ကျေနပ်
ဖွယ်ကောင်းသာ အကျိုးကျေးဇူး ရလဒ်ဖြစ်သည်။ လူငယ်တိုင်းတွင် ညှာတာစိတ်၊စာနာစိတ်၊ကူညီ
တတ်သောစိတ်များရှိရန်အလွန်လိုအပ်သည်။ စာရေးဆရာမ ဆရာမသန်းမြင့်အောင်က ကိုယ်ချင်းစာ
စိတ်ဆိုတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာ ရင် လူတစ်ယောက်မှာရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့
လိုအပ်ချက်နဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုပြည့်စုံသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့လူသားတိုင်းကိုကူညီပါတယ်
ဆိုတဲ့စကားဆိုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာရင်လူတစ်ယောက် မှ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
လူသားအားလုံးတိုင်းမှာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။ လူသားတိုင်းရရှိ သင့်သော
လိုအပ်ချက်နဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ပေးနိုင်ခြင်းသည် ပရဟိတဆိုသော စိတ်ဓာတ်နှင့် အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တိုင်းတွင် ပရဟိတ လူသာချင်းစာနာသောစိတ်ဓာတ်ရှိရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။
ဖွားလာသော ကလေးသူငယ်များသည် အများအားဖြင့် သူတို့အရွယ်နှင့် သူတို့ရရှိသင့်သောအခွင့်အရေးများ
ဆုံးရှုံး နေတတ်ကြသည်မှာ လူတိုင်းသိသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ကလေးသူငယ်များ ရသင့်ရထိုက်သော
အခွင့်အရေး များကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့လူငယ်များသာမကအများက၀ိုင်းဝန်းကာစုပေါင်းကူညီခြင်း
များကို လူသား တိုင်းရရှိနိုင်ရန်ရေးမှာ ကျွန်ုပ်တို့လူသားတိုင်းတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။
8:16 AM IT_Youth_Donation No comments
အရဟံ .......... ကိလေသာကင်းစင်တော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို ပြုတော်မမူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... လူနတ်တို.၏ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... ရွှေရောင်အဆင်းဝါဝင်းစွာဖြင်. သပ္ပါယ်စွာ စံပယ်တ်ာမူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... ဒေါသအမျက် ကင်းစင်တော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကင်းစင်တော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... မနာလိုဝန်တိုခြင်း ကင်းစင်တော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... သတ္တဝါအားလုံးတို.အပေါ်တွင် မေတ္တာတရားကြီးမားတ်ာမူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... လောကသုံးပါးကို သိမြင်တ်ာမူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... ပါရမီတော်အပေါင်းတို.ဖြင်.အထူးပြည်.စုံ တော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... သိစရာအားလုံးတို.ကို အမှန်အတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင်. သိမြင်တ်ာမူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... မှန်ကန်၍ အကျိုးရှိသော စကားကိုသာ ဆိုတော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... ပညာဥာဏ်အထူးကြီးမားတော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... စိတ်နှလုံးအထူးကြည်လင်အေးချမ်းတော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
အရဟံ .......... လောက၌အမြတ်ဆုံး ဖြစ်တော်မူသော ......... မြတ်စွာဘုရား။
ထိုကဲ.သို. .......အတုမရှိသော ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို.ဖြင်. အထူးပြည်.စုံတော်မူသော
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား တပည်.တော်သည် အသက်ရှင်ခွင်.ရသမျှ ကာလပါတ်လုံး
အကြွင်းမဲ. ယုံကြည်အားကိုးစွာဖြင်. လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပူဇော် ဖူးမြော်မာန်လျှော. ကန်တော.ပါ၏
" နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္ဗာသမ္ဗုဒဿ
နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္ဗာသမ္ဗုဒဿ
10:19 AM littlekG No comments
Computer နယ်ပယ်က ကျယ်ဝန်းတယ်ဆိုတာ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ မှာ ဖွာလန်ကျဲ နေတဲ့...
softwareများကသက်သေခံနေပါတယ်....တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေ ကိုကောင်းတဲ့ ဘက်မှာ အသုံးကျ ကြမယ်ဆိုရင်..
လူသားတွေမှာ သောကဆိုတဲ့စိတ်ညစ်စရာကြီးလည်းရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး...တစ်နေ့ 
တနေ့ ကြားလိုက်ရတာတွေက ရင်ထဲမကောင်းဘူး....Gtalk အကောင့်အခိုးခံရပြန်ပြီ..acebook လော့ဒ်ကျသွားပြန်ပြီတဲ့ ..တော်ရုံလည်း ကိုယ်ဘာသာကိုယ်
ဂရုစိုက်ပါလားလို့ အော်လိုက်ချင်တယ်..အင်တာနက်လိုင်းတွေကမကောင်းလို့ ဘူနေတဲ့ကြားထဲ..
တစ်ခါတလေ အဲ့သိလိုမျိုးတွေးလိုက်မိတယ်..ကိုယ်ကို ကိုယ်ပြန်ပြောနေမိတယ်..မင်းတော်တော်စိတ်ပုတ်တာပဲလို့ ။
ကျွန်တော်လည်းအဲ့စိတ်ကိုပြင်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်..(စက်ဆရာ မအားသေးလို့ ) အဲ ဟုတ်ပါဘူး။
ပြောနေတဲ့ လက်စတောင်ပျောက်သွားတယ်....အထူးသဖြင့် ဒီရက်ပိုင်းတွေအင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးရင်.... နည်းနည်းဂရုစိုက်သုံးကြပေါ့ဗျာ။ဆိုင်ကြီးတွေကတော့ မပြောလိုပါဘူး..သူတို့ မှာကအဆင်မြင့် software တွေတင်ထားတော့..
Close Tab ပိတ်လိုက်တာနဲ့အကောင့်တွေကလည်း Log Out ဖြစ်ပြီးသားပါ။လိုင်းတွေကျလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်.....
error တက်သွားလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်..မိမိ အကောင့်တွေ password တွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက်Hint တွေမကျန်ခဲ့စေနဲ့ နော်...
နောက်တစ်မျိုးက ကိုယ်ပိုင် Laptop နဲ့ သုံးပြီး ကိုယ့်စက်နဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ Remember ပေးထားကြတယ်လေ..
password ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်....ဒီ software လေးနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။နောက်ပြီး မိမိ password လုံခြုံမှုရှိမရှိ ကို http://www.passwordmeter.com မှာသွားစမ်းနိုင်ပါတယ်..software name ကတော့ See Password ပါ...။ပုံတွေကတော့Software လေးလုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ပါ..အဆင်ပြေမယ်ဆို password လေးပြန်ပေးနော်... :P